Intuos Creative Stylus 2, pensilihazo matihanina ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny haben'ny kojakoja fanaovana sary na soratra amin'ny efijery an'ny iPad-tsika dia lehibe sy miovaova satria mahadiso fanantenana, indrindra rehefa te hahatratra valiny matihanina ianao na farafaharatsiny mba ho akaiky araka izay azo atao. Amin'ity lafiny ity Wacom dia antoka iray amin'ny kalitao, ary ho an'ireo izay tsy maniry na mila manatratra izay takelaka nomerika lafo vidy ary aleony mampiasa ny iPad amin'ny asany, izao dia manome antsika ny Wacom Intuos Creative 2, ilay taranaka vaovao ny Intuos Creative izay azontsika notsapaina taloha ela be eto ihany, ary manatsara azy amin'ny fomba maro. Afaka nizaha toetra an'ity stylus vaovao ity izahay ary hilaza aminao ny fiheveranay eto ambany, miaraka amin'ny horonan-tsary.
1 Tranga iray amin'ny zavatra rehetra ilainao
2 Fanamboarana sy fampiasana
3 Ny pensilihazo tsara indrindra ho an'ny iPad
Tranga iray amin'ny zavatra rehetra ilainao
The Intuos Creative 2 Izy io dia tafiditra ao anaty tranga iray izay ahitantsika izay rehetra ilaintsika ho azy, mety ho an'ny fitehirizana sy ny fitaterana. Ny tariby mametra dia fohy dia fohy ka mahazo aina rehefa mitahiry, nefa miaraka amin'izay dia tsy mahazo aina ny mampifandray amin'ny solosaintsika, zavatra ankasitrahana na dia araka ny filazan'ny mpanamboatra azy aza dia misy bateria manome 26 ora fampiasana, ka amin'ny fampiharana dia azontsika atao ny mampiasa azy mandritra ny andro maromaro manadino ny tsy maintsy andoavana azy. Ahitana tendrony fanoloana ihany koa ny tranga raha toa ka simba ilay efa mifatotra amin'ny pen nomerika.
Ny fifandraisan'ny tariby mametra dia vita amin'ny alàlan'ny lamosiny, manala ny fehikibo vita amin'ny fingotra manarona azy, ary izany no tena ampahany amin'ny stilosy manaitra ny fahalemena. Satria ny Intuos Creative 2 amin'ny ankapobeny dia fitaovana matanjaka vita amin'ny akora avo lenta. Ny tapany metaly sy ny fingotra manarona faritra ambany mba hahafahany mihazona azy tsara dia manome pensilihazo ambony lavitra noho ny ankamaroan'ireo izay hitantsika eny an-tsena.
Fanamboarana sy fampiasana
Ny stylus dia misy fifandraisana Bluetooth 4.0, angovo ambany hifandraisana amin'ny iPad anao ary manome azy ireo asa mandroso kokoa noho ny stylus mahazatra izay manery fotsiny ny efijery. Amin'izany fomba izany emahavita manavaka hatramin'ny haavon'ny tsindry 2048 izay ho hita taratra amin'ny hatevin'ny lozam-pifamoivoizana ao anaty hafanam-po. Ny bokotra hita eo akaikin'ny tendrony dia mety raha hanao asa toy ny famafana fa tsy mila mamoaka ny stila mba hikasika ny efijery an'ny iPad.
Saingy tsy isalasalana fa ny zava-bitan'i Wacom tamin'ity stylus ity ary izay mahatonga ny fahasamihafana amin'ny ambiny dia ny tendrony, satria ny Intuos Creative 2 dia manana teboka saika tsara toy ny penina na pensilihazo mahazatra. Amin'izany fomba izany dia tsy vitan'ny fikolokoloana tsara fotsiny ianao fa fantatrao ihany koa ny toerana handokoana anao, zavatra tena sarotra amin'ny tendron'ny tendrony amin'ny stazy mahazatra ary tena sarotra ampiasaina izany.
Ny fananganana stylus dia tsy manahirana, fa tsy eo amin'ny sehatra mahazatra ho an'ny fitaovana Bluetooth ary mety hampikorontana. Tsy maintsy nampidirina Bluetooth ianao, saingy tsy voalamina ao amin'ny toeran'ny fitaovanao, fa avy ao anaty ilay rindrambaiko mifanentana. Raha vantany vao vita izany, ny haavon'ny penina dia avo kokoa ary ny asany dia mahafa-po kokoa. Ity karazana fikirakirana ity dia misy lafy ratsy: tsy mandeha tsara amin'ny rindranasa tsy tohanana. Saingy tsy olana amiko io amin'ity indray mitoraka ity satria ny katalaogin'ny fampiharana mifanentana dia be dia be ary misy ny zava-dehibe indrindra, maro amin'izy ireo ihany koa no mamela ny fikitika ny sarin-efijery vita amin'ny felatanana. Sombiny manan-danja hanatsarana ny fampiasana ny penina: esory ny fihetsika marobe mikasika ny iPad-nao.
Ny pensilihazo tsara indrindra ho an'ny iPad
Izay rehetra nampiasa takelaka nomerika na pensilihazo karazana toy izao dia mahalala tsara fa tsy ny fakana pensilihazo sy ny famelana ny fisainanao ho lasa wild. Ho fanampin'ny fahaizanao mamorona dia ilaina ny mandresy ny fiankinan-doha amin'ny fianarana mafy hahazoana vokatra tsara indrindra. Tsy misy tsy itovizany amin'ity lozisialy ity, fa Wacom dia nanao izay farany vitany mba hampihenana azy araka izay tratra. Ny halavan'ny tendrony, ny bokotra fihetsika, ny katalaogin'ny fampiharana mifanaraka aminy ary ny fahaizana manavaka hatramin'ny haavon'ny tsindry 2048 no mahatonga azy iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ireo izay mitady stylus ho an'ny iPad, faharoa ho an'ny takelaka digitizer matihanina miaraka amin'ny vidiny lafo kokoa. Misy an'ity penina nomerika Intuos Creative 2 ity ianao amin'ny vidiny $ 79,90. Manana fampahalalana bebe kokoa ianao sy ny mety hividianana azy amin'ny tranokalan'ny Wacom.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Intuos Creative Stylus 2, stylus matihanina ho an'ny iPad
Afaka mampiasa karatra fanomezana Apple ianao amin'ny Apple Store App
Azonao atao izao ny misintona ny lalao Goat Simulator maimaim-poana. Atorinay anao ny fomba ahazoana azy.